Faa'iidooyinka cayaaraha: sababaha loo iska dhigo qaab nololeedka deggan | Ragga Stylish
Faa'iidooyinka cayaaraha waxay kaa caawin doonaan inaad dareento xoog jir ahaan iyo maskax ahaanba. Yuu dhihi karaa maya taas?
Waa hagaag, xaqiiqadu waxay tahay in dad badani sii wadaan inay ku noolaadaan nolol aan degganeyn inkastoo xaqiiqda ah in cilmi-baaristu aysan ka tagaynin shaki: isboortiga wuxuu caawiyaa inuu sii noolaado oo ka sii fiicnaado. Haddii ay tahay kiiskaaga, sii wad aqriska waxay noqon kartaa riixitaan yar oo aad ubaahantahay inaad jirkaaga dhaqaajiso.
1 Qalbi caafimaad qaba
2 Niyad wanaag
3 Streamlines maskaxda
4 Hurdo tayo fiican leh
4.1 Tilmaamo hurdo wanaagsan
5 Tamar badan
6 Diiq yar
7 Qaab ahaan ayuu kuu ilaaliyaa
8 Jidh badan oo qeexan
8.1 Sidee loo labistaa si aad jimicsiga u tagto?
9 Isku kalsooni badan
10 Khatarta cudurada
Qalbi caafimaad qaba
Dhammaan waxtarka cayaaraha waa muhiim, laakiin qaar ayaa waxyar ka muhiimsan kuwa kale. Tanina waa kiis cad oo faa'iido xaraash ah laga helayo, tan iyo markii iska cad qof walba dan ayey ugu jirtaa inuu qalbigiisu ku shaqeeyo awood buuxda ilaa iyo inta suurtogalka ah.
Haddii aad si joogto ah u ciyaarto isboorti, waad iska ilaalin kartaa dhiig karka iyo kolestaroolka, sidaas awgeed waxay yareyneysaa halista cudurka wadnaha.
Isboorti sameynta ayaa ah faa iido badan u leh niyadda guud iyo caafimaadka maskaxda. Taasina waa in dhaqdhaqaaqa uu sii daayo endorphins badan. Sida muuqata, markasta oo dadaalka laqaado, waxaa sii weynaanaya xaddiga uu sii daayo jirka walaxdan xanuunsata.
Sidan oo kale, in kastoo ay kugu kacayso waxoogaa bilow ah, dhawr toddobaad kadib (xitaa kayar) fursadaha ayaa sarreeya oo ah inaad ku dhammaato jillaab. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad siiso isku day.
Barashada iyo xusuusta waa laba shaqo oo maskaxeed oo aadan ka maarmi karin. Waad ku mahadsan tahay socodka dhiigga ee ay u dirto maskaxdaMid ka mid ah waxyaabaha aad sameyn karto si aad u ilaaliso maskaxdaada ayaa ah inaad ciyaarto ciyaaro badan. Faa'iidooyinka isboorti ee maskaxda ayaa si gaar ah muhiim ugu ah da 'cayiman ka dib, laakiin qof walba wuu ka faa'iideysan karaa.
Isboortiga ka sokow, waxyaabaha kale ee aad sameyn kartid si aad maskaxdaada ugu qaabeysid qaab dhismeed waa la aqriyaa oo waligaa ha joojin barashada waxyaabaha cusub.
Haddii aad si xun u seexatay habeenkii dhaweyd, tani shaki la'aan waa mid ka mid ah faa'iidooyinka cayaaraha ee sida aadka ah aad u xiiseyso. Dadka wax tababara maalintii waxay u muuqdaan inay hurdo badan u seexdaan habeenkii.. Sida muuqata, sare u kaca xoojinta jimicsiga, ayay u badan tahay inaad ugu dambayn ku raaxaysato hurdo tayo sare leh.
Tilmaamo hurdo wanaagsan
Fiiri maqaalka: Sidee si fiican loo seexdaa. Halkaas waxaad ka heli doontaa talooyin kale iyo tabaha kaa caawinaya inaad si fiican u seexato habeenkii.
Isboortigu wuxuu cunaa tamar badan, laakiin si la yaab leh, isla waqtigaas wuxuu sidoo kale ku siinayaa xoog badan, taas oo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud uga gudubto dhammaan caqabadahaaga maalinlaha ah. Dadka jimicsiga sameeya waxay la kulmaan daal ka yar kuwa aan samayn.
Shaki kuma jiro in yareynta culeyska fekerka ay tahay mid ka mid ah mudnaanta bulshada casriga ah. Marka heerarka adrenaline iyo cortisol ay cirka isku shareeraan (xaalad nasiib darro badanaa dhacda inta badan), diiqadda ayaa la wareegeysa. In kasta oo culeys yar uu faa iido u yeelan karo xaaladaha qaarkood, qadar aan xakameynin laguma talinayo Farxada ka sakow, waxay ka qayb qaadataa kordhinta halista cudurada.
Nasiib wanaag, waxaa jira daaweyn looga hortago buuqa oo dad aad u tiro badan ayaa isticmaala. Ku ciyaarista isboortiga ayaa la cadeeyay inay tahay mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee lagu maareeyo culeyska fekerka iyo degenaanshaha. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu horreeya uguna muhiimsan waa in la isku dayo in nolosha si deggan loo qaato.
Qaab ahaan ayuu kuu ilaaliyaa
Muruqyadaada iyo lafahaaga oo aad u adkeysid ayaa fure u ah wax walba. Laga soo bilaabo ficillada yaryar ee nolol maalmeedka si aad u qabatid wax badan iyo in ka badan tababarka illaa laga gaaro heer sare.
Laakiin jimicsigu ma aha oo kaliya inuu kordhiyo xoogga, waa waxay kaloo caawisaa kordhinta adkeysiga, dabacsanaanta iyo isku-duwidda.
Jidh badan oo qeexan
Dhammaan cayaaraha waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo gaari lahaa jir qeexan oo soo jiidasho leh. Laakiin dufanka gubanaya faa'iido uma leh oo keliya sawirkaaga, laakiin sidoo kale waxay xoojineysaa caafimaadkaaga iyadoo la yareynayo qatarta buurnida, dhibaato la xiriirta tiro aad u badan oo cudurro la xiriira.
Sidee loo labistaa si aad jimicsiga u tagto?
Fiiri maqaalka: Eeg inaad tagto qolka jimicsiga. Halkaas waxaad ka heli doontaa sida diirada loo saaro isku darka jimicsigaaga si aad uhesho qaab iyo raaxo labadaba jimicsigaaga.
Isku kalsooni badan
Cayaartu waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka gudubto astaamahaaga ama kuwa kale. Laga soo bilaabo waqtiga iyo calaamadaha masaafada ilaa guulaha ciyaarta feerka, guulaha isboorti waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan (caafimaadna leh) ee kor loogu qaado isku-kalsoonaanta. Markaad wanaag ka dareento naftaada oo aad wax walba awood u leedahay, kalsoonidaas iyo amnigaas ayaa la wareegaya wax kasta oo aad qabato.
Cudurradu waxay ka dhigan yihiin mid ka mid ah halista ugu xun ee caafimaadkaaga. Iyada oo ay weheliso cuntada, isboortigu waa hubka ugu awoodda badan ee aad gacanta ku hayso si looga hortago tiro badan oo cudurro khatar ah, oo ay ku jiraan cudurada daba dheeraada iyo noocyada kala duwan ee kansarka.